सरकारलाई गाली गरेर मात्र रोग नियन्त्रण हुन्न, नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्यो « Pathibhar Online
हाल नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ चिकित्सक प्राडा. भगवान कोइराला शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक रहिसक्नुभएको छ । करिब ८ वर्ष शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहँदा उहाँले सो अस्पताललाई मुलुकको एउटा उत्कृष्ट अस्पतालको रूपमा स्थापित गराउनुभएको थियो ।
काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थका संस्थापकसमेत रहेका डा. कोइराला हाल सातवटै प्रदेशमा विशिष्टिकृत बाल स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न बाल अस्पताल स्थापनाको अभियानमा पनि हुनुहुन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरिरहेका डा. कोइराला मुटु शल्य चिकित्सा र अस्पताल व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सफल चिकित्सक मानिनुहुन्छ । कोभिड– १९ को महामारी फैलिरहेको वर्तमान अवस्थामा डा. कोइरालासँग लक्ष्मण अधिकारीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
कोभिड–१९ को पहिलो बिरामी देखिएको करिब दुई महिनापछि एक्कासि ह्वात्तै बिरामी बढेको देखिएको छ, के अब नेपालमा यो भाइरस तीव्र गतिमा फैलिने संकेत हो ?
दुवै हुनसक्ने स्थिति छ । संक्रमण फैलिँदै जान पनि सक्छ, हामीले नियन्त्रणका उपायहरु कडाइका साथा पालना गर्न सक्यौं भने अझै पनि नियन्त्रणमा रहन सक्छ । नियन्त्रणका उपायहरु कार्यान्वयनमा ढीलासुस्ती गरियो, बिरामी कहाँ हुन सक्छन्भनेर खोज्न र परीक्षणमा ढिलाइ गरियो, लकडाउन पनि खुकुलो गर्दै लगियो भने केही दिनमै आगोको फिलिङ्गोले जंगल डढेलो लगाएजस्तो हुनसक्छ । हामी ढुक्क हुने स्थिति छँदैछैन । तर हाल धेरै बिरामी भएका छैनन्, बिरामी भएका पनि गम्भीर भएका छैनन्, त्यसकारण हामीले उच्च सतर्ककासाथ काम गर्नुपर्ने स्थिति हो, यो ।
महामारी नियन्त्रणका लागि मुलुकले अपनाइरहेको नीति कत्तिको प्रभावकारी देख्नुभएको छ ?
यसमा यो नै सत्य हो, यो नै ठीक हो भन्ने हुँदैन । हरेक कुराको आप्mनो ठाउँमा उत्तिकै महत्व हुन्छ । जनता आफैँ, सुशुचित हुने, आफैँ सतर्क हुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, हात धुनेलगायतका स्वास्थ्य र सरसफाइका नियमहरु पालना गर्ने गरेमा यसै पनि यो रोग नियन्त्रणमा रहन्छ । अहिले आम मानिसहरु बाहिर जान रुची देखाउने र घरभित्र चाहिँ गैरजिम्मेवार किसिमको व्यवहार गर्दै, झुण्डमा बसेको, खाएको, खेलेको, जिस्किएको देखिएको छ । यो वर्तमान महामारीको परिस्थितिमा गलत हो ।कसैलाई रोग भएको रहेछ भने भित्रभित्रै रोग संक्रमण भएर उग्ररुप लिनसक्छ ।
लकडाउनले नेपाल मात्र होइन संसारलाई नै खत्तम पारेको छ । यसको मोडलको बारेमा जनस्वास्थ्य विज्ञहरुको धारणा आउला नै । मेरो अनुभव र व्यक्तिगत विचारमा सामाजिक दुरी कायम गर्ने सुनिश्चितताका साथ अहिलेको लकडाउनलाई रिफम्र्याटिङ गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेको छ । यसको मतलव लकडाउन खोलौँ भन्ने होइन । यो विषयमा थप बहसको आवश्यकता छ । यसमा थप बैकल्पिक उपाय दिन सकिने हो भने यसलाई परिमार्जन गर्न सकिएला भन्न मात्र खोजिएको हो ।
यस्तो स्थितिको व्यवस्थापन भन्न जति सजिलो छ, गर्न त्यति नै गाह्रो छ । भन्नेहरुले लकडाउन अघि नै यस्ता मानिसहरुलाई बाहिर पठाउनु पथ्र्यो भनिरहेका छन् । तर कति मानिसहरु बाहिर जान्छन् भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने ? यो कठिन छ । तीन लाखभन्दा बढी मानिसहरु त्यहीबेला बाहिर गएका थिए । निर्णय गर्नेहरुले आवश्यक पर्नेहरु गइसके होला भन्ने पनि सोचे होलान् ।
गर्न के सकिन्थ्यो भने अहिले गरेको जस्तै जो जहाँ छन् त्यहीँ स्थानीय वडाहरुमार्फत् नगई नहुने मानिसहरु कति छन् तिनीहरुलाई कन्ट्रोलका साथ पठाउन सकिन्थ्यो कि सकिदैनथ्यो, त्यस बारेमा होमवर्क गर्न पाएको भए हुन्थ्यो । पहिले नै सोचविचार गर्न पाएको भए आप्mनै दाजुभाइ दिदीबहिनीले यति दुःख पाउँदैन थिए होला । तर कतिपय कुराको सीमा नै हुन्न ।
बेला नहुने मात्र होइन, ढीला नै भइसकेको छ । हामीले एक हप्ता अघि नैमन्त्रालयलाई सुझाव दिइसकेका छौँ र निर्देशिका बनाउने क्रममा छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायत यस क्षेत्रका जिम्मेवार सबैको भावना अरुलाई पनि सेवा सुचारु गरौं भन्ने नै छ । तर लकडाउनको कारणले बिरामी आउन नसक्ने स्थिति, लकडाउनको कारण कतिपय स्वास्थ्यकर्मीलाई अस्पताल आउन नपर्ने गरिएकोले स्वास्थ्यकर्मी पनि कम, कतिपय अस्पतालमा कोभिडको संक्रमण होला भन्ने त्रास र सोही कारण बिरामी पनि अस्पताल आउन नचाहिरहेको स्थिति पनि छ ।
भाइरोलोजी पढ्नेहरु, जनस्वास्थ्य विज्ञहरु, हामीहरु, विकसित वा अविकसित मुलुक सबैका लागि यो नयाँ विषय भएको छ । तर मेरो विचारमा जहाँ रोकथामका उपायहरु कडासँग अपनाइएन, त्यहाँ यो रोग महामारीका रुपमा फैलिएको छ । भाइरोलोजीले हामीलाई सिकाएको छ कि यसलाई हेलचेक्र्याइँ गर्नुहुन्न, यो आगोको फिलिङ्गो जस्तो हो भनेर । जहाँ अन्य रोग बढी छ त्यहाँ यसको प्रभाव धेरै हुन्छ भन्ने पनि भनिँदै आएको थियो । यही कुरा उहान र अन्य केही मुलुकमा सावित भएको छ ।
हामी कहाँ नियन्त्रित स्थितिमा रहनुमा प्रमुख कुरा नियन्त्रणका उपाय बेलैमा अपनाउनु हो । नेपालमा रोग नफैलिँदै, विदेशबाट पनि रोग लागेकाहरु नआउँदै लकडाउन शुरु भयो, सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु पनि बेलैमा बन्द गरियो । साथै समुदायमा रोग नफैलिँदै जनचेतना, सरसफाइलगायतका पब्लिक हेल्थ इन्टरभेन्सन बेलैमा गरियो । नेपालमा रोग धेरै नफैलिनुको श्रेय यसैलाई दिनुपर्छ ।
हामीकहाँ चिकित्सकहरु, बेडहरु, आईसीयू बेडहरु पर्याप्त छन् तर यो रोगलाई बेरोकतोक फैलिन दिइयो भने यो पूर्वाधारको केही चल्दैन । होइन कडाइका साथ नियन्त्रणमा हामी सबै लाग्ने हो भने अलिअलि भएका बिरामीको उपचार गर्ने क्षमता हामीसँग हुन्छ ।
रोगलाई धेरै फैलिन नदिई यस्तै रुपमा अलिअलि फैलिई रहेमा हामी कम क्षतिमै तैरिने सम्भावना छ । उपचार कसरी गर्ने भन्दा पनि यो रोग आउनै नदिन, फैलिनै नदिन के गर्ने भन्ने बारेमा सबैले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो रोग नियन्त्रणका लागि सरकारलाई गालि गरेर मात्र हुँदैन, आमजनताको सहयोग आवश्यक छ । सरकारले बाहिर कडा गर्छ, परिवारमै रोग सारिदियो भने सरकारले के गर्ने ?
अहिलेको समय भनेको पब्लिक हेल्थका मापदण्ड, निर्देशनको पालना गरी तयारी गर्नुपर्छ, विज्ञानले दिएका सुझावहरुलाई अंगिकार गर्नुपर्छ । आम समुदायले व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने, अस्पतालमा अरु बिरामीको उपचार गर्दा पनि रोग संक्रमणको कुरातर्फ ध्यान दिने संस्कृति बसाउनुपर्छ । हामीलाई यो महामारीले सिकाएका पाटोहरु हुन् । यसले भविष्यमा मानिसको स्वास्थ्य राम्रो राख्न र उपचार गर्न सहयोग पुग्ला ।
आप्नो मुटुरोग क्षेत्रका बिरामीलाई के भन्नुहुन्छ ?
उपचारका लागि आवश्यक परे मुटु रोगका बिरामी अस्पताल आए हुन्छ, डराउनु पर्ने स्थिति छैन । कोभिडकै कारण नेपालका अस्पतालहरु भद्रगोल भइसकेका छैनन्, त्यसैले उपचार आवश्यक पर्दा आए हुन्छ । केही उपाय लागेन भने हामीलाई फोन गरे पनि हुन्छ ।
भारत ओलीबिरुद्ध लाग्नु आधारभुत र तत्कालीन दुबै कारण मजबूत छन । यसबारेमा नेपाली राजनीतिमा सामान्य
एसईईमा सबै विद्यार्थीलाई ‘सी’ ग्रेड कम्तिमा दिने तयारी
अन्तत : फुट नजिक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)